တိုင်းအစိုးရကို ဆုံးမဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လာ၊ ကပ်ရောဂါအသွင် ၀က်သက်ကာကွယ်ဆေးထိုး DVB Headlines
🎬 DVB TVnews📅2yea.
🎬 RFA Burmese လှတျလပျတဲ့အာရှအသံ📅 1 yea.
DVB - ဒီဗှီဘီ ရုပျသံ ညနခေငျး သတငျးမြား (DVB TV 30.05.2020 Evening News)
🎬 DVB TVnews📅 10 mon.
ရွှေတိဂုံဘုရားရွှေအခိုးခံလိုက်ရပီ #သတင်းစုံ #shwemyanmar #myanmarnews #မြန်မာ
🎬 Shwe Myanmar📅3wee.
မင်းသားကြီးလူမင်းအဖမ်းမခံရမီနောက်ဆုံး ရုပ်သံ Video#သတင်းစုံ#myanmarnews#စစ်တပ်#စစ်သတင်း#myanmararmy
🎬 Shwe Myanmar📅2mon.
R2P ဝင်လာရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲ မင်းအောင်လှိုင်ကြောကါဒူးတုန်နေပီ #မင်းအောင်လှိုင် #သတင်းစုံ2020 #သတင်းများ...
🎬 Shwe Myanmar📅 1 mon.
အမေရိကမ်ကို မ အ လ တပ်ကစိမ်ခ်ါလိုက်ပီ #သတင်းစုံ၂၀၂၀ #သတင်း #myanmarnews #မအလ #မင်းအောင်လှိုင် #news
🎬 Fool's Bag channel📅5mon.
အမေစုကိုဖော်ကောင်လုပ်လိုက်တဲ့ကွီးဖြိုး အတုဆိုတာဖေါ်လိုက်ပီ #သတင်းစုံ#myanmarnews #news #shwemyanmar
ရန်ကုန်ကိူအကြမ်းဖက်နှိမ်နက်းနေသော မအလတပ်များ#သတင်းစုံ #myanmarnews #myannar #မင်းးအောင်လှိုင် #မအလ
လှည်းတန်းမှာပွဲကြမ်းနေ ပြည်သူတွေပြန်ချနေပီ #သတင်းစုံ #myanmar #news #myanmarnews #yangon #စစ်သတင်း
2021-4လပိုင်း တလစာဗေဒင်ဟောစာတမ်း #ဗေဒင် #ဗေဒင်၂၀၂၀ #စံဇာဏီဘို #sanzernibo #myanmarnews
🎬 မင်းသင်္ခ-MTK📅2wee.
KNU နဲ့ မြန်မာတပ်များ ယနေ့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေ
🎬 Myanmar Latest Hot News - သတင်းထူး သတင်းဦးများ📅2mon.
မတ်လ ၂၇ရက် နောက်ဆုံးတျုက်ပွဲအတွက်ဘာတွေပြင်ထားရမလဲ #သတင်းစုံ #myanmarnews #shwemyanmar #myanmar
သီမုထာမှာကျဆုံးသွားသောknu စစ်သားစောတောကလူး #knu #သတင်းစုံ #shwemyanmar #myanmar #စစ်သတင်း
🎬 Shwe Myanmar📅2wee.
R2P ကို မကြောက်ဘူး မင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်ပြောပီ
လူ ၃၀ ထကျပိုမစုရ အမိနျ့ခထြားပမေယျ့ ရာနဲ့ခြီ ဆန်ဒပွမှု ၃ ရကျ ဆကျတိုကျရှိလာ - BBC News မွနျမာ
🎬 BBC News မွနျမာ📅2mon.
ကလေးမြို့မှာ ပြည်သူတွေညီတော့ ရဲတွေနားကားကုန်ပြီ
🎬 Myanmar Latest Hot News - သတင်းထူး သတင်းဦးများ📅2wee.
DVB - ဒီဗှီဘီ ရုပျသံ ညနခေငျး သတငျးမြား (DVB TV 03.06.2020 Evening News)
လင်၅ယောက် ယူထားသော အကယ်ဒမီထက်ထက်မိုး ဦး
🎬 Min Thar Gyi မငိးသားကြီး📅5mon.
အမေစုကို လုပ်ကြံမယ့် ပြောဆို #သတင်းစုံ #myanmarnews #အမေစု #aungsansuukyi #သတင်းစုံ၂၀၂၀#မအလ#စစ်သတင်း
မ အ လ တပ်ဖွဲ့များဖေါက်ခွဲဖို့ကြံနေပီ #သတင်းစုံ2021 #သတင်းများ #မအလ #သတင်းစုံ၂၀၂၁ #myanmarnews
မတ်လ၂၇ ရက် သွေးစွန်းသော တော်လှန်ရေးနေ့ 27-3-2021 #myanmarnwws #myanmat #သတင်းစုံ၂၀၂၀ #2021myanmar
🎬 Cele News - TV📅 11 mon.